Ny vilany eo amin'ny maso dia mamely - inona no tokony ataoko? Ny bakteria vascular amin'ny masony, ny fiterahana amin'ny maso - ny antony, ny fitsaboana
Ny fonosana eo amin'ny maso dia miposaka - inona no tokony hatao, ahoana no hamaritra ny antony ary hanafoana ny aloka?
Ny fiasan'ny retina dia manohana ny tambazotran'ny kapilara, manome voka-dratsin'ny oksizenina sy ny sakafo. Indraindray misy tasy mena na mena midorehitra miseho eo amin'ny clôla. Ny antony mahatonga ilay soritr'aretina dia ny fipoahan'ny sambo ao amin'ny maso. Tsy mampidi-doza ny tranga tokana raiki-tampisaka, fa ny fiverimberenan'ny kapilara dia manondro olana goavana amin'ny fahasalamana.
Sarona ny masony
Ny tranga manasongadina ny soritr'aretina voavolavola dia mety ivelany sy anatiny. Ny vondrona voalohany dia manondro ireo fanjakana vonjimaika izay azo alaina mora foana. Ny safidy faharoa dia ahitana ny lozam-pifamoivoizana marefo izay mety miteraka vokatra mampidi-doza. Ny diagnosy dia manampy amin'ny famantarana ara-pahasalamana fanampiny voafaritra ao amin'ny andininy manaraka.
Ny sambo eo amin'ny maso dia mamely - ny antony mahatonga ny toetra ivelany:
tsy ampy torimaso;
mitomany mikiakiaka, indrindra amin'ny zaza;
misotro toaka be;
fanandratana ny maso;
famonoana na setroka ao amin'ny efitrano;
gusty, rivotra mahery;
fahamoram-panahy amin'ny tara-pahazavana mamirapiratra;
mitaingina zavatra mahaliana;
fanafihana mahery vaika ny havokavoka sy ny hafa.
Mipoaka ilay sambokely eo amin'ny masony ary malahelo ny masony
Ny tranga voafaritra dia tsy dia zakan'ny tsy fahatsapana, mahita ny olona iray fa misy toerana mena amin'ny sclera, mijery ny fitaratra. Raha, raha aorian'ny famelezana, ny ratra na ny lozam-piarakodia hafa, dia mitranga ny sambo amin'ny maso, dia mety hiparitaka any amin'ny faritra simba tanteraka ny fanaintainana. Amin'ny toe-javatra hafa, ny loharanon'ny fahatsapana mahatsiravina dia ny tambazotra kapila ary ny fibres-nerveuse ao amin'ny tsimokaretina. Fanaintainana mahatsiravina eo amin'ny maso - miteraka:
Ny aretin'i Sjogren ;
dacryoadenitis sy ny hafa.
Mipoaka ilay sambofiara eo amin'ny masony, maloka ny loha
Ity sary momba ny fahasalamana ity dia vokatry ny faneriterena tsindry, indrindra ny fanerena arteria. Ny antony lehibe indrindra mahatonga ny fantson-dra amin'ny tsiranoka dia ny olana goavana. Ny tambajotram-pifandraisana dia ahitana kapilara marevaka sy marefo. Rehefa mitombo ny tsindry momba ny fluid biologique, dia tsy afaka manohitra ny fanerena sy ny fiviliana izy ireo. Raha ny taonan'ny hypertension dia mamoaka ilay sambo amin'ny maso, ny zavatra tokony hatao dia hilaza amin'ny kardioolo.
Indraindray ny olana voafaritra dia mitombo avy amin'ny fitomboan'ny tsindry amin'ny intracranial. Ny aretin'andoha amin'iny tranga iny dia mafy, manosika na manosika. Ny antony iray hafa dia ny fitomboan'ny tsindry anatiny. Ny soritr'aretina fanampiny dia mitovy amin'ny hypertension. Ireo dia toe-javatra tena mampidi-doza, izay mifototra amin'ny fifampidinihana miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana.
Matetika ny ranon-dra no mipoaka
Ny fiverimberenan'ny fivalozana matetika ao amin'ny clôla dia manamarina ny fivoaran'ny aretina mitaiza. Ny bala amin'ny masony dia mety hanjavona noho ny fampihenana ny endocrine, ny kardioolojika, ny neurolojia ary ny rafitra hafa. Mba hahafantarana izay manosika ny foto-pahaizana mety, dia tokony hisy dokotera mahay. Avy amin'ireto fantson-dra ireto:
voan'ny kanseran'ny ra;
manaraka ny fahotana;
fahavoazana ara-pahasalamana sy aretina hafa.
Ny sambo eo amin'ny maso dia mamotipotika - ny aretina
Ny fanamafisana ny antony mahatonga ny kapirara dia manomboka amin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana. Ny aretin-koditra ao amin'ny maso dia hita amin'ireto fomba manaraka ireto:
fanadihadiana ultrasound of apple;
Ny fitsapana Norn sy ny fomba hafa.
Zava-dehibe ny fametrahana marina ny antony mahatonga ilay sambofiara eo amin'ny maso tsipika, inona no azo atao amin'ny kapilara manimba ny dokotera dia afaka mamaha-panafana fotsiny aorian'ny fikarohana ny anton'ny olana. Raha misy aretina mitroka ny aretina, ny dokotera dia hanome fitenenana ho an'ny manam-pahaizana manokana ho an'ny fanadihadiana:
Efa simba ny sambokely - toy ny mihinana azy?
Ny fitsaboana vonjy taitra ao an-tokantrano dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny tranga tokana monja, raha toa ka mahatonga azy ireo avy amin'ny antony ivelany sy mora vidy. Amin'ny toe-javatra hafa, ny dokotera ihany no hanampy amin'ny fanafoanana ny ranomaso amin'ny maso, ny fitsaboana ny kapilara mifototra tsy tapaka dia miankina amin'ny antony mahatonga ny fahasimban'ny vovobony. Ny fampidinana ny fitsaboana ny toe-javatra toy izany dia mampidi-doza, feno fahasarotana sy fahasimbana eo amin'ny fahitana maso.
Ny alikaola amin'ny maso - inona no tokony hatao?
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy misy fitsaboana manokana takiana, afaka miandry 5-10 andro fotsiny ianao mandra-piverenan'ny hematoma. Raha misy fantson-dra ao amin'ny maso, ary te hampitombo ny fanarenana ianao, dia maniry ny hampihena ny entana hita maso. Tsara kokoa ny miala vetivety amin'ny fijerena televiziona, mipetraka eo anoloan'ny masinina amin'ny solosaina, mamaky ary misy zavatra hafa mitovy amin'izany. Manolo-tena ny hampiara-maso ny solomaso, tsy misy jiro mirehitra ao amin'ny efitrano ary ny fialan-tsasatra matetika miaraka amin'ny hodi-katsaka.
Fomba hafa amin'ny fitsaboana ny aloka ao amin'ny maso:
Alefaso miaraka amin'ny vahaolana manokana ny sac conjonctival.
Apetaho eo amin'ny hodi-kibo mafana ny hatsembohana mafana alohan'ny hatory.
Ampiasao ny fitsaboana voajanahary ho an'ny mangana.
Maka vitamina izay manatsara ny metabolisma ary manamafy ny tambajotra kapila.
Ny sambo ao amin'ny masaka miposaka - milatsaka
Ao an-trano dia avela ampiasaina vahaolana azo antoka fa tsy misy singa mahery. Ny fitaovana mahomby kokoa dia tsy ampiasaina afa-tsy raha tapa-kevitra ny hanapotika ny sambo amin'ny maso, ny tokony hatao sy ny fomba fitondràna ny toe-pahasalamana dia omena azy avy amin'ny manam-pahaizana manokana. Ny fitsaboana tsy miankina dia tsy azo ekena sy mampidi-doza, ka mety hiteraka zava-tsarotra lehibe.
Mamelatra rà mandriaka ao amin'ny maso:
Vizalin sy analogues.
Ny sambo eo amin'ny maso dia mamotika - ny fanafodin'ny volokano
Ny fomba fitsaboana hafa mahomby indrindra dia ny fampiharana ny tsindry sy ny loto. Ny sambo kely vaky ao amin'ny maso, inona no tokony hatao:
Mampiasà boribory feno kôkôma na ovy eo amin'ny hodi-tongotra mandritra ny 10 minitra.
Mampiasà kofehy vita amin'ny kodiarana mangatsiatsiaka amin'ny dite mainty mangatsiaka.
Manaova fanamafisam-peo amin'ny aloman-dalamby maimaim-poana mangatsiatsiaka anaty akora.
Amin'ny maraina dia asio 3-4 heny ny hodi-masony amin'ny kibay misy ranon-tsakafo madio na legioma.
Ny sambo eo amin'ny maso dia mamotipotika - ny fikarakarana volokano
ranom-boasary - 0.5 tsp;
volo fotsy - 0,5 tsp;
rano - 150 ml.
Hametraka zavamaniry maina voatoto.
Hanondrahana akora amin'ny rano mangotraka.
Miantehy 20 minitra.
Afeno ny fanafody.
Manaova plastika ho an'ny maso simbana amin'ny fampidirana ranom-boankazo.
Azonao atao ny manondraka ny zavamaniry tsirairay (ranom-boasary 50 ml ho an'ny tsirairay), ary ampiasao ny vahaolana enti-miasa.
Ny sambo ao amin'ny maso dia mamontsina - vitamina
Ny famoahana ireo vokatra mahasoa sy ireo vokatra biolojika taorian'ny fiverimberenana dia tsy hanampy azy amin'ny fandroahana azy, fa hiantohana ny fisorohana ny toe-javatra mampalahelo ity toe-javatra mampalahelo ity. Ny fanamafisana ny fanaky ny maso dia atao amin'ny alalan'ny vitaminina B, E, P, A, F, C ary PP. Afaka mahazo sakafo avy amin'ny sakafo izy ireo, saingy mora kokoa ny manamboatra harona efa vita:
SuperOptic sy analogues.
Iridocyclitis - soritr'aretina
Ny tabilao miaro amin'ny alika rehetra
Meningitis - soritr'aretina amin'ny olon-dehibe
Sakafo sakafo avy amin'ny ririnina
Cocktail chocolat - ny fomba mahavariana mahasalama mahasalama
Mividy lafo i Brasilinas
Ny aretina amin'ny vava
Urticaria amin'ny ankizy - ahoana no hahafantarana sy hitondràna toe-javatra mahatsiravina?
Volo mangatsiaka mangatsiaka ao anaty lafaoro
Famaranana ny Corridor
Nahoana no manonofy trondro ny trondro?
Fashion Clothes 2016
31 toerana izay sarotra inoana ny fisiany
Yoga miaraka amin'ny osteochondrosis